ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဒီဇိုင်း ဆိုတာဘာလဲ? (Sustainable Design)
ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဒီဇိုင်း (Sustainable Design) ဆိုတာက အရာဝတ္ထုတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးစေတတ်ခြင်း၊ တည်ရှိပြီးသား ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အတူ လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရှုထောင့်ကနေဖန်တီးပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ ဂေဟစနစ်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။
ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဒီဇိုင်း (Sustainable Design) ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ဒီဇိုင်း(environmental design)၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေတဲ့ဒီဇိုင်း (environmentally sustainable design) နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတိပေးခြင်းဒီဇိုင်း(environmentally conscious design) တွေလို့လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ်။
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ ကျွမ်းကျင်ပြီး သေချာတိကျတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ ပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ သယံဇာတအရင်းအမြစ်တွေကို ဒီဇိုင်းဆွဲရာကအစ ပြန်လည်အသုံးသပ်ပေးခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချခြင်းနှင့် လူသားတွေကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ထိတွေ့စေခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဒီဇိုင်းရဲ့ နိယာမတွေကတော့ -
၂။ ပြန်လည်ဆန်းသစ်သုံးစွဲမရသော စွမ်းအင်များကို လျှော့ချပေးခြင်း
၄။ ရေအရင်းအမြစ်များကို ကာကွယ်ခြင်း
၅။ အိမ်တွင်း ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း
၆။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုအလေ့အကျင့်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကို သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးသား Recycle ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ မိမိ အိမ်၊ကျောင်း၊ရုံးနဲ့ ဆိုင်ခန်းတွေမှာ အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာအများစုမှာ sustainable decorations တွေကို အသုံးပြုလာကြတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ RecyGlo ကလည်း Sustainable ဖြစ်စေရေးကို အားပေးလျက်ရှိတဲ့ အပြင် အများပြည်သူလူထုကိုလည်း Sustainable နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဝေမျှအကြဲပြုပေးနေပါတယ်။
RecyGlo မှ Sustainable ဖြစ်စေရေးကို အလေးထားတဲ့ Training Services တွေနဲ့အတူ Waste Management Services တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရန်ကုန်ရုံးဖုန်းနံပါတ် (09- 404245800, 09 263 223 496) နှင့် မန္တလေးရုံး (09-674909995) တို့ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သလို E-mail မှတဆင့် ဆက်သွယ်လိုပါက contact@recyglo.com နှင့် communication@recyglo.com တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
RecyGlo မှာရနိုင်တဲ့ အမှိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပညာရပ်တွေကို လေ့လာလိုပါက RecyGlo ရဲ့ Official website ဖြစ်တဲ့ www.recyglo.com နှင့် Facebook Page ဖြစ်တဲ့ RecyGlo Myanmar တို့မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
The intention of sustainable design is to make sure there are no negative impacts on the environment by using skillful, sensitive design. This means using renewable resources, impacting the environment minimally, and connecting people with the natural environment.
3. Use environmentally preferable products
5. Enhance indoor environmental quality and
RecyGlo promotes sustainability and raises awareness of sustainable issues to the public. For more information on RecyGlo's Sustainable Training Services and Waste Management Services, please contact our Yangon office at (09-404245800, 09 263 223 496) and Mandalay office (09-674909995) or e-mail at contact@recyglo.com and communication@recyglo.com.
To learn more about the services available at RecyGlo, please visit RecyGlo Myanmar’s website www.recyglo.com and Facebook Page RecyGlo Myanmar.